EGWUREGWU KACHASỊ ANYA NKE 2019 NA PS4: TOP 10 NA NKỌWA NA FOTO - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Top iri kacha atụ anya 2019 PS4 egwuregwu
Otu n'ime usoro ntanetị egwu kachasị ewu ewu, PlayStation 4, na-atụ anya ọtụtụ ọkwa dị elu na 2019, n'etiti nke nwere ebe maka multiplatform na ọrụ ndị ọzọ. N'elu iri iri kachasị atụ anya na PS4 bụ ndị kachasị amasị maka ọdịdị dị iche iche maka Fans nke console sitere na Sony.
Ezigbo Onye Ngwọta 2 Na-ehicha
Obere mkpu: New Dawn
Ọnụ nkịtị 11
Ekwensu nwere ike ibe ákwá
Sekiro: Onyunyo nke abuo
Oge Ikpeazụ nke Anyị: Nkebi nke Abụọ
Ụbọchị nkwuputa: January 25
Na Japan, a na-ebipụta egwuregwu Resident Evil 2 Remake dị ka Biohazard RE: 2
Ndị okike gbalịrị ịmepụta echiche onye mbụ na igwefoto dị na mmụọ nke "ụlọ akwụkwọ ochie", mana n'ikpeazụ kpebiri na akara nke ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ndị Fans niile nabatara mmeghe a, mgbe ngosi ngosi E3 2018, nzaghachi zuru ezu dị mma.
Na mbubreyo nke Jenụwarị, ndị fan nke otu n'ime egwu egwu na-ewu ewu na-echere otu akụkụ nke abụọ nke Resident Evil. Leon Kennedy, bụ onye na-amabughị ya na enyi ya na Claire Redfield nwere nsogbu, chọtara onwe ha n'etiti etolite zombie. Ndị mmepe Capcom kwere nkwa na ị ga-amata onye obibi ahụ, Otú ọ dị, a ga-eme ya n'ụzọ dịgasị iche: igwefoto ga-adị n'azụ njirimara isi, ụlọ ọrụ ndị uweojii ebe isi ihe ga-emeghere ga-agbasapụ ọbụna dị egwu na egwu.
Ụbọchị mwepụta: February 15
Nkwupụta ọkwa maka egwuregwu Far Cry: New Dawn nwere na Los Angeles na mmalite December 2018
Akụkụ ọhụrụ nke Far Cry na-agbakwa ndị egwuregwu ahụ ume ka ha bulie isiokwu nke Ubisoft na akara ha na saịtị ma na atụmatụ atụmatụ. Anyị na-echere nsogbu ọzọ na ndị mara mma na ndị ụwa na-emepe emepe na ụyọkọ nke quests na ọtụtụ ebe. Atụmatụ ahụ ga-eme egwuregwu maka ihe ndị na-emepe emepe na America 17 afọ mgbe njedebe nke Far Cry 5. Ọ dịghị ihe na-eme mgbanwe na usoro egwuregwu. Ọ na-anọgide na-enwe olileanya na New Dawn dịkarịa ala ebe ga-abụ New.
Ụbọchị nkwuputa: February 22
Metro: Ọpụpụ na Russia ga-egosi dị ka Metro: Ọpụpụ
Ndị na-akwado Dmitry Glukhovsky na-achọsi nzukọ ọzọ na egwuregwu mmegharị nke ọrụ ndị edemede ahụ na mbara igwe "Metro". N'akụkụ ọhụrụ nke Ọpụpụ, a ga-enye onye ọkpụkpọ ahụ njem gaa n'obodo ndị dị n'ógbè Russia nke post-apocalyptic. Imirikiti ebe a ga - anọchi anya ya na oghere oghere, àgwà ahụ agaghịkwa ezobe usoro iku ume na - emechi ihu igwe, n'ihi na ikuku ga - adị mma.
Ebe mbu nke Metro Ọpụpụ na E3 2017, bịara dị ka ihe ijuanya nye ọtụtụ ndị egwuregwu na, n'ozuzu ya, a mara ọkwa ọkwa ahụ. Tom Hoggins si n'akwụkwọ akụkọ Daily Telegraph, nke a kpọrọ Metro Exodus bụ otu n'ime "mkpọsa kachasị mma, ọkwa ọhụrụ" n'oge ngosi ahụ. N'otu oge ahụ, magazin PC World na-etinye Metro Exodus na nke abụọ n'ime egwuregwu iri nke iri nke PC, magazin magazin a na-akpọ Wired kwetara na ụgbọala na-adọkpụ dị ka otu n'ime ndị kachasị mma.
Ụbọchị ntọhapụ: April 23
N'agbata January 2019 nkọwa ndị ọzọ ga-ekpughe na ihe ndị na-abịanụ.
Wepu otu n'ime egwuregwu kachasị mma na afọ a, na-atụ anya ka ọtụtụ ndị na-akwado ụwa Mortal Kombat. Nke iri na otu ga-apụta na PS 4 na mmiri. Ka ọ dị ugbu a, ndị mmepe anaghị ekerịta ozi gbasara ọrụ na-abịa n'ihu, ma onye ọ bụla ghọtara na egwuregwu ọgụ dị ike na-akwadebe maka ụzọ ọpụpụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mgbochi ndị dị egwu, ụdị obi ọjọọ nke na-emeghị ihe ọ bụla na-adịghị mma nke mere ka ha pụta ìhè na akụkụ mbụ nke ọrụ ahụ.
Ụbọchị mwepụta: March 8
Ihe omume nke egwuregwu Ekwensu nwere ike Ikwa 5 na-ewere ọnọdụ ọtụtụ afọ mgbe akụkụ 4
Akuku ohuru nke ekwensu nwere ike iburu ihe dika ihe ohuru, ma o bu oru ya iji mee ihe dika adrenaline na ihe ojoo. Aged Dante na enyi ya Nero na-alụso ndị mmụọ ọjọọ agha n'ụwa na ụwa ọzọ. Anyị ọzọ na-ekpuchi ọnyá na-egbu egbu, na-enye ọtụtụ ngọngọ ma na-eburu àgwà nke ndị iro. Slasher okpukpuchi alaghachi mmiri a!
Ụbọchị mwepụta: March 22
Sekiro: Shadows Abụọ Abụọ - ihe egwuregwu na-ewere ọnọdụ na feudal Japan na "oge nke ógbè ndị agha"
Ihe oru a sitere n'aka ndi dere amara nke oma na nkpuru-obi di iche iche anya na anya. Ọ dịghị onye nwere ike iche ihe Sekiro ga-abụ. Omume dị omimi dị iche na ọrụ ndị gara aga nke ụlọ ọrụ ahụ site na ọnọdụ Japanese na enweghị mmasị na mgbanwe nke amaokwu ahụ. Onye ọkpụkpọ ahụ nwere onwe ya ịhọrọ ma ọ chọrọ ịlụ ọgụ na ndị iro na-emeghe ma ọ bụ na-ahọrọ ime ihe na nzuzo. Maka usoro ikpeazu nke ịbanye n'ime egwuregwu ahụ, a gbakwunyere nko-cat, nke na-enye gị ohere ịrịgo ugwu na ntụgharị ihu iji chọọ ụzọ ọhụrụ.
Ụbọchị ntọhapụ: 2019
N'ọgbakọ ogbako, ụlọ ọrụ ahụ mere nkwupụta banyere enweghị ngosi nke ụbọchị ntọhapụ ruo mgbe egwuregwu ahụ dị njikere karị.
Fans of the original The Last of Us kweere na na 2019 ha ga-ahụ otu ihe na-eme na otu n'ime ihe kasị mma lanarị egwuregwu njem nke afọ ndị na-adịbeghị anya. Ndị mmepe nke Nkịta Ndị Na-adịghị Ekebealarị ebuteworị ọtụtụ trailers na vidiyo na ngosipụta nke egwuregwu maka ọha na eze. Nkwekọrịta nke akụkụ ọhụrụ ahụ kwere nkwa ịkwaga ndị egwuregwu afọ ise n'ihu mgbe njedebe nke mbụ. Ọnọdụ dị na ụwa agbanwebeghị: otu mgba ahụ na zombies, agha maka ihe onwunwe, ikpe na-ezighị ezi n'ụwa nile na obi ọjọọ. Ikekwe afọ a ga-abụ oge kachasị mma maka ntọhapụ maka mgbidi na-adịru ogologo oge.
Ụbọchị ntọhapụ: Eprel 26
Egwuregwu Days Gone ga-adị na ngwaọrụ dị iche iche maka nwelite, njem maka njem na nyocha, yana ike ịmepụta ọnyà na ngwá ọgụ.
Otu n'ime mmadụ ole na ole nke natara ụbọchị ịhapụ ya bụ onye nnọchianya nke ihe omume na-adị ndụ na-esote na post-apocalypse. N'ime oge, ndị na-emepụta SIE Bend Studio akwadebewo ụwa a na-emepe emepe, onye na-akwado biker protagonist, usoro dị mma iji meziwanye njem onwe onye na akụkọ dị ukwuu na ọkwa Uncharted. Ma ọ dịkarịa ala, ya mere, sị ndị kere ihe egwuregwu ahụ. Gịnị n'ezie? Anyị ga-achọpụta n'oge na-adịghị anya.
Ụbọchị nkwụsị nke egwuregwu ahụ ka a ka amabeghị, Otú ọ dị, ndekọ maka nyocha ihu ọha mbụ ga-adịgide ruo na January 21, 2019
Otu n'ime ihe ndị a na-atụ anya ya na ụdị nchịkwa Dreams ahụ ga-eme ka echiche ndị egwuregwu na-ese okwu banyere okike n'ime egwuregwu kọmputa. Dị ka ndị nnọchiteanya nke ụlọ ọrụ Media Molecule kwetara na ha ga-abụ mgbanwe n'ime egwuregwu na egwuregwu: ọrụ ahụ ga-eji PlayStation Move, kwe ka ndị ọrụ gbanwee na ịmepụta ọkwa, mepụta ihe ngosi na ịkekọrịta ha na egwuregwu ndị ọzọ. N'eziokwu, a kwadoro nyocha beta nke nrọ maka afọ atọ n'usoro. Kedu ihe mere? Ikekwe ndị mmepe siri ike nghọta ihe ha bu n'obi, n'ihi na atụmatụ ha bụ Napoleonic.
Ụbọchị mwepụta: Ike 14
Ọnụma 2 dị na mmepe nkwalite nke studio id Software na ụlọ ọrụ Swedish ụlọ ọrụ Avalanche
Akụkụ mbụ nke onye na-agba ụta na-egbuke egbuke bụ ihe ngosi nke Borderlands, ọ bụkwa egwuregwu dị ka simulator nkume. O mere ka ngo ahụ, bụ nke nwere nnukwu atụmanya na ihe ndị dị mkpa maka ịghọ onye a ma ama, mere ka ọ bụrụ onye na-agba ụda egwuregwu na-agwụ ike. Ewoe, ma Rage mebiri ndị gamers, Otú ọ dị, ebumnuche na 2019 bu n'obi idozi ọnọdụ ahụ. Ndị na-ede akwụkwọ na-ekwe nkwa ime egwuregwu na-akpali akpali ma dị egwu na-emesi ike na egwuregwu na egwuregwu dị ụtọ. Ndị mmepe ga-emegharị ihe ndị mbụ ahụ? Anyị na-amụta na n'etiti May.
Ndị na-egwu egwuregwu na Fans nke PlayStation 4 na-atụsi anya ike ịhapụ ọtụtụ ọrụ dị ịtụnanya nke na-ekwe nkwa iwepụ oge ha niile n'efu maka njem a na-agaghị echefu echefu gaa na ụwa nke jupụtara na ụwa jupụtara na ihe ndị na-adọrọ adọrọ, akụkọ na-adọrọ adọrọ ma dị jụụ egwuregwu. Egwuregwu iri kachasị mkpa nke afọ a, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ga-adọta uche nke obodo ma mee ka obi ụtọ dị na gburugburu ebe a.
Kedu SSD ụgbọala maka kọmputa dị mma na 2018: n'elu 10
Otu esi eme ngosi - nzọụkwụ site nzọụkwụ
Ịnyefe ego site na WebMoney na Yandex.Money
Njehie na-eziga iwu na ngwa na Microsoft Excel: ụzọ iji dozie nsogbu ahụ
Were ya na ị mepee ibe weebụ, ọ nwere vidiyo vidio nke na-amasị gị, egwu na foto ndị ịchọrọ ọ bụghị naanị igwu egwu site na ihe nchọgharị ahụ, kamakwa iji chekwaa na kọmputa gị maka iji oge offline mee ihe. Mgbakwunye FlashGot maka Mozilla Firefox ga-ekwe ka ịrụ ọrụ a. GụKwuo
Nchịkọta ihe oyiyi na Steam
Hichapụ faịlụ site na disk diski